Agenda - Florida International Expo Expo
Maarso 16-18, 2021 | 9:00 subaxnimo ilaa 6:00 pm ET
Waqtiyada oo dhami waa Aaga Waqtiga Bariga (ET)
Talaado, Maarso 16
Bandhigga Grand Hall ayaa Furmay
9:00 subaxnimo - 9:10 subaxnimo
9: 10 AM - 6: 00 Maqaalka
Bandhig, Shirar & Isku Xirka
10:00 subaxnimo - 11:30 subaxnimo
Webinar: Fursadaha Ganacsi iyo Faa'iidooyinka Ganacsi ee Florida
Sharaxaad: Hoggaamiyaasha ganacsiga ee hormuudka ka ah waxay la wadaagi doonaan fikradahooda ku saabsan Florida oo ah goob ganacsi oo ugu horreysa.
Xoghayaha Ganacsiga ee Florida
Madaxweynaha & Maamulaha, Enterprise Florida, Inc.
Madaxweynaha & Maamulaha guud
Gudoomiye ku xigeenka Gudiga
Embraer Diyaaradaha Holdings, Inc.
Ameerika Energy, Inc.
Madaxweyne kuxigeenka sare
6: 00 wakhti dambe
Carwadii Grand Hall oo Xidhan
Saacadaha Kadib: Barxadda dalwaddu waa la heli karaa saacadaha bandhiga ka dib si ay u qaabisho booqdayaasha xilliyada kala duwan. Waad booqan kartaa waabab waxaadna codsan kartaa kulanno lala yeesho carwooyinka xilligan.
Arbaco, Maarso 17
9:00 subaxnimo - 9:05 subaxnimo
Farriin Soo Dhaweyn ah
9: 05 AM - 6: 00 Maqaalka
Webinar: Kaabayaasha Dhaqaale ee Florida iyo Saadka
Sharaxaad: Baro sida kaabayaasha Florida ay u siiyaan ganacsiyada saldhig ay ka iibiyaan alaabtooda iyo adeegyadooda macaamiil caalami ah, gaar ahaan kuwa ku yaal Ameerika.
Madaxweynaha iyo maamulaha
Rugta Ganacsiga Florida
Golaha Madaarada Florida
Ururka Kastamka & Gudbinta Kastamka Florida
Khamiis, Maarso 18
Webinar: Xarunta Cusub ee Florida
Sharaxaad: Akadeemiyada fadhigeedu yahay Florida iyo ganacsatada waxay ka wada hadli doonaan teknolojiyadda casriga ah ee adduunka beddelaysa.
Guddoomiye, Ganacsiga & Horumarinta Caalamiga
Guddiga Maamulka ee EFI
Golaha Teknolojiyada Florida
DAREENKA, Florida Atlantic University
Aasaasaha, Madaxweynaha & Madaxa Xafiiska Sayniska
Wax dheeri ah ka baro tikniyoolajiyadaha cusub ee ku yaal Gobolka Florida!
Machadka Sensing and Embedded Network Systems Engineering (I-SENSE) wuxuu hogaamiyaa waxqabadyada jaamacadaha ee Sensing and Smart Systems, oo ka mid ah afarta tiir ee cilmi baarista ee FAU. Ujeeddada 'I-SENSE' waa in kor loogu qaado heerka sare ee cilmi baarista ee Sensing and Smart Systems; iyo in la horumariyo, la muujiyo, lana shaqeeyo xalal tiknoolaji ah oo leh saameyn bulsheed sare. Kooxdu waxay khibrad ballaadhan u leedahay qaabaynta, dejinta, iyo maaraynta kaabayaasha dareenka isku xidha. Hadafka waxaa hogaaminaya koox isku dhafan oo adag oo ka kooban shan xubnood oo shaqaale ah, sagaal macalimiin ah, seddex cilmi baarayaal dhakhaatiir ah, in kabadan 60 kuliyadood oo xiriir la leh, iyo in kabadan labaatan caawiyaal cilmi baaris ah. Shaqada kooxda waxaa lagu taageeraa iyada oo loo marayo AFRL, NSF, NIH, NIST, DOE, NOAA, iyo la-hawlgalayaasha degmada iyo warshadaha.
Difaaca 'Violet Defense' wuxuu adeegsadaa awoodda iftiinka 'ultraviolet light' si looga ilaaliyo meelaha maalinlaha ah cudurrada halista ah iyadoo la dilo ilaa 99.9% ee E. coli, Salmonella, MRSA, C. diff., Norovirus, C. auris, iyo coronavirus. Loogu talagalay in lagu sameeyo jeermiska fudud, khadkayaga wax soo saarka SAGE wuxuu siiyaa jeermiska UV ee tamarta sare leh dusha iyo hawada meelo kala duwan, oo ay ku jiraan daryeelka caafimaadka, waxbarashada K-12, tacliinta sare, tas-hiilaadka isboortiga, martigelinta, dhismooyinka dowladda, iyo gawaarida gurmadka degdegga ah
Difaaca Violet wuxuu bixiyaa xalka kaliya ee loo yaqaan 'Xenon UV xal' kaas oo lagu rakibi karo qol waqti buuxa ah, abuurista hab joogto ah oo wax looga qabanayo baahiyaha jeermiska. Xal dabacsan oo xalka moobiilka ayaa bixiya hab lagu keeno jeermiska UV goorta iyo meesha aad ugu baahato dalab ahaan. Tikniyoolajiyadda shatiga ah ee ka dambeeya Violet Defense ayaa suurtogal ka dhigeysa in si kharash-ku-ool ah loogu daro xalka ku dhowaad deegaan kasta.
Neobiosis, LLC waa hay'ad gaar loo leeyahay oo qandaraas ku leh horumarinta qandaraaska iyo soosaarka (CDMO) oo leh laba xarumood oo wax soo saar oo ku yaal magaalada hoose ee Gainesville iyo shaybaar cilmi baaris iyo horumarin oo ku dhex yaal Sid Martin UF Innovate biotechnology Institute ee Alachua, FL. Ujeedada Neobiosis waa go'doominta unugyada, unugyada iyo vesicles ka baxsan (EVs), oo leh awood daawo, oo laga helo unugyada uur-ku-jirta (dhalashada), oo ay ku jiraan xudunta, xudunta dhiigga iyo dheecaanka amniotic. Magaca Neobiosis ("nolol cusub") waxaa laga soo qaatay tijaabooyin taxane ah oo la yiraahdo Parabiosis ("wada noolaansho") halkaas oo lagu ogaadey in unugyada, unugyada iyo EV-yada ka yimaada tabaruc da 'yar loo isticmaali karo si kor loogu qaado bogsiinta shaqsiyaadka waayeelka ah. Neobiosis waxay soo saartaa wax soo saar cusub oo caafimaad leh, dhalasho waqti-buuxa ah, oo loogu talagalay ururada macaamiisha ah ee doonaya inay qaataan alaabada bayoolojiga ah inkasta oo tijaabooyin caafimaad oo ay ansixisay FDA oo loogu talagalay ganacsiga suuq caalami ah. Neobiosis sidoo kale waxaa ka go'an inay horumariso dhuumaha gudaha ku jira ee hantida aqooneed iyo dawooyinka noolaha.
** Ajandaha waa la badali karaa.